‘बेश्या’सँग बिताएको साँझ - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ समय: १६:३२:५५
होटल प्याराडाइजको रूम नं १५ मा छु एक्लै। यो होटल बुटवलको हो। साथीहरू रेयुकाई १८ औं शाखाको सेमिनारमा गएका छन्। म भने अलि बिसञ्चो भएको कारण गइन।
ब्याग खोतल्छु र डाइरी निकाल्छु। केही लेख्न खोज्छु अहँ फुर्दैन। त्यसलाई पनि थन्क्याउँछु। केही नभएपछि आफ्नो पुरानो गजल सङ्ग्रह ‘यात्रामा कतै निस्कँदा प्रायः बोक्छु’ निकाल्छु र त्यति मज्जा नलागे पनि पढ्छु। यो होटल धेरै तवरबाट चर्चित रहेछ। सबै सुबिधाहरूको ब्यवस्था छ। भनेको अर्डर तुरून्त पूरा हुन्छ। यी भन्दा छुट्टै बिषय पनि छ यहाँ। त्यो हो समाजले नामाकरण गरेको बेश्याहरूको मुख्य थलो। चर्चित भनाउँदा व्यक्तित्वदेखि लिएर गाडीका सम्पूर्ण स्टाफहरूसम्म, सेमिनारमा भाग लिन आएका भलाद्मीदेखि धर्मका पण्डितसम्म, विद्यार्थीदेखि लिएर शिक्षकसम्म, कलाकारदेखि पत्रकारसम्म, व्यापारीदेखि चिकित्सकसम्म सबै–सबै यो स्थानबाट टाढा हुन सकेका छैनन्। यहाँ १५–२० जना युवतीहरू राखिएका छन्। कम उमेरकादेखि लिएर अर्ध उमेरसम्मका पनि छन्। ५० देखि ५,०००।– सम्म विविध मूल्यका ।
मलाई थाहा छ होटलको चापभन्दा उनीहरू धेरै छन्। त्यसैले सकेसम्म ग्राहक फकाएर रकम जम्मा गर्नु उनीहरूको पोलिसी हो। मसँगको उनीहरूको उपस्थिति पनि यस्तै मात्र हो भन्ने म बुझछ्। मेरो प्रतिक्रिया केही नरहेपछि एउटी थपक्क उठेर बाहिर जान्छिन्। अर्की बसी रहन्छिन्।
मेरो सम्वादले उनलाई केही भएजस्तो लाग्यो। उनी खट्पट् गर्न लागिन्। अनुहारमा एक्कासी बर्षा यामको पहाडको मौसम झैँ परिवर्तन झल्कियो।
“तिम्रो हातमा यो के भा’को ?” उनको पाखुरामा भएको घाउको खाटो देखाएर सोध्छु। “यो सबै किन तँपाईलाई भन्नु” उनी मप्रति शङ्का ओकल्छिन्।
“मैले तिमीलाई आफ्नो जस्तै सम्झेर पो सोधेको त” भनें।
उनी एक क्षण मौन साथै गम्भीर भइन्।
एकघण्टा पछि नास्ता तलै गरेर फ्रेश भै म उकालो चढ्दै थिएँ। हेटौंडाको एउटा केटाले प्वालबाट यौनकार्य गरेको देखेपछि फोटो खिचेछ।
त्यसपछि समय निकै तनावग्रस्त भयो। यौनकार्यमा संलग्न युवालाई बाहिर निकालेर सबैले झपारियो। “के गर्नु जर्बजस्ती हैन, होटलवालाई पैसा तिरेर सहमतिमा हो क्यारे” भनेर त्यो युवक त्यहाँबाट फरार भयो। भित्र हेरेँ कुनामा निलिमा लुकेर बसिरहेकी थिइन्। अनुहार शिरकले छोपे पनि मैले उनको हातमा भएको घाउको खोटबाट चिनेँ प्रष्ट।
यो घटनाले मलाई केही सोच्न बाध्य गरायो। यो पेशामा खराब को हो भनेर। यौन कार्यमा लाग्ने नारीहरू या यसमा सङ्लग्न पुरुषहरू। या त यस धन्दाका सञ्चालकहरू या फेरि यसकार्यलाई अपराध ठान्ने समाज। या त यस्ता बिषयलाई प्रोपोगान्डा मच्चाउने लेखक, पत्रकारहरू। के नारी मात्र बेश्या बन्न सम्भव छ ?
के बिनापुरूष नारीमात्रको उपस्थितिले यस्तो हुन्छ ? कतै हाम्रै समाजको सङ्कीर्ण दृष्टि कारणले यो घटना अपराध त भएको हैन ? यावत कुराहरू सोचेँ। अनि लाग्यो निलिमा अब म कहाँ आउँदिनन्। यस्तै के–के सोच्दै गर्दा अचानक ढोका ढक्ढकियो। उठेर ढोका खोलेँ। थाहा भयो निलिमा रहेछिन्। मैले बिना कुनै बहाना उनलाई भित्र आउने इशारा गरेँ। उनी आइन् र बसिन्। समय दिनको साढेचार बजेको थियो।
“अघिको घटनाले तपार्इंलाई मप्रति घृणा जाग्यो होला हगि ?” बस्दा–बस्दै सोधिन्। “कुन घटना ? मलाई त केही पनि थाहा छैन” अन्जान भइटोपलेँ।
“जहाँ तपार्इंले मलाई चिनेर त्यो हल्ला साम्य गराइदिनु भयो र मेरो इज्जत जोगाइदिनु भयो।” प्रसङ्ग सम्झाइन्।
एकदिन अचानक उसले मलाई नाटकीय रुपमा माया गर्‍यो। नयाँ कपडा, मिठा–मिठा खाने कुराहरू ल्याएर आफै बनाएर खुवायो। मैले अनुमान लाउनै सकिन उसले के गर्न लाग्यो भनेर। एक मनले उनको मन फर्किएछ भनेर दङ्ग परेँ। त्यसको भोलिपल्ट हामी घुम्न जानुपर्छ भनेर उसले मलाई कलकत्ता लिएर गयो। एकरात रेलको यात्रापछि हामी कलकत्ता पुग्यौँ। सियालद भन्ने रेलजक्सनमा उत्रियौँ। उसले मेरो दिदीको घर छ जाऊँ भन्यो। त्यसपछि जक्सनबाट मोलाली,चाँदनीचोक हुँदै एकदम भीडभाड भएको ठाउँमा लिएर गयो। लाग्छ त्यो जग्गा झुपरपट्टि हुनुपर्छ। त्यहाँ अति मान्छेहरूको घुइँचो थियो। सबै मातेका, मुखभरी पान चपाएका पुरूषहरू मात्र देखिन्थे। बाटोहरू सबै–सबै थुकेर रातै रगत पोखिएको टाटो जस्तै देखिन्थ्यो। आइमाईहरू छिटपुट मात्र नजर पर्थे। दिउँसै पनि त्यो स्थान अँध्यारो लाग्थ्यो कारण त्यो जग्गा बिशाल पुलमुनिको थियो। मलाई मनमनै डर चाहिँ अति लागिरहेथ्यो। तै पनि उसको भर थियो। “नई मुर्गा आई” भनेर त्यहाँका मान्छेहरू भन्थे। म भाषा बुझ्दिनथेँ । १५–२० मिनेट पछि चेपै–चेप हिँडेर हामी एउटा पुरानो भव्य घरमा पुग्यौँ। त्यहाँभित्र उसले मलाई लिएर गयो। कोठामा एउटी मोटी आइमाई बसि रहेकी थिइन्। हामीलाई देख्ने बित्तिकै “आऊ–आऊ, त राम्ररी आयौ” भनेर भन्यो। त्यसपछि हामीलाई “ल आराम गर” भनेर छुट्टै कोठामा लिएर गयो। मलाई कोठामा राखेर “एक छिन है, म दिदीसँग गफ गरेर आउँछु” भनेर ऊ बाहिर निस्कियो। एक घण्टा बित्यो, दुई घण्टा बित्यो, तर अहँ ऊ आएन। निकै बेरपछि एउटा भुसतिघ्रे कालेपुरूषसँग अघिकी मोटी दिदी भने आइन। “ल यो साहबलाई तिमी चित्त बुझाऊ” भनेर भन्यो। त्यो भुसतिघ्रे वंगाली मुसुमुसु हाँस्दै आफ्नो दारी मुसार्दै थियो। “दिदी भाइ खोइ त ?” भनेर मैले सोधेँ। “अरे छोकरी, म तेरो दिदी हैन। तँलाई अघिको केटाले १० हजारमा बेचेर चल्यो। तैँले अब धन्दा सुरू गर्नुपर्छ बुझस्” भनेर भन्यो। मैले आफु बेश्यालयमा पुगेको वास्तविकता थाहा पाएँ।
कयौँ पटक गुहार मागेँ। रोएँ, कराएँ, प्रतिवाद गर्न चाहेँ तर सब असम्भव। आत्महत्या गर्न पनि कैयौँ पटक सोचेँ तर उनीहरूको पलपलको निगरानीका बावजूद र मेरो पेटको बच्चाको कारण सम्भव भएन। हप्तादिनसम्म त हरसम्भव प्रयास गरेँ। सट्टामा प्रत्येक दिन कोर्रा, भुत्ल्याई, खाइयो। जबसम्म आफू राजी भइन तबसम्म भोकै राखे। अन्ततः विवश भएर बाँच्नको लागि आफूलाई जिउँदो लाश बनाइ बेश्या बनाउन बाध्य भएँ। बिरामी, बिसञ्चो केही पनि भन्न पाइन्न रहेछ त्यहाँ। उनीहरूको खटन मान्नै पर्ने। दिनमा कम्तिमा आठ दश जनाभन्दा बढीसँग सम्पर्क राख्नु पर्ने। यतिसम्म कि अरुलाई त महिनावारी हुदाँ पनि धर हुन्नथ्यो। रक्सी खाएर, पान खाएर, मनपरी गर्दै, बोल्दै, आउँथे र आफूखुशी गर्थे। मानेन भने चुरोट वा अर्थोकले पोल्थे। तँपाईले सोध्नु भएको मेरो पाखुराको घाउ पनि त्यस्तै घटनाको चिनो हो।”
त्यहाँबाट भारतीय प्रहरीको सहयोगले म पुनः वानरहाट फर्किएँ र हर्कलाई खोजेँ तर पाउन सकिन। दुईतीन महिना अघिनै उसले त्यो ठाउँ छाडेको कुरा बताए सबैले। त्यसपछि म आफ्नो माइतघर फर्किएँ, बाटो–बाटोमा शरीर बेच्दै र लुछाउँदै। भारत र नेपालका प्रहरीले पनि सहयोगको सट्टा मेरो ज्यान लुछे। माइतघरमा तीनचार महिना बसेँ। त्यतिन्जेलसम्ममा यो पनि जन्मियो। सुरूका दिन त गाउँमा राम्रै गरी बिताएँ। पछि आमा बाबालाई आफ्नो सम्पूर्ण यथार्थ बताएँ। मेरो कहानी थाहा पाएपछि अचानक बाबा–आमाको, घरपरिवारको र क्रमशः छरछिमेको म प्रतिको धारणा बद्लियो। “बेश्या भएर पो आएछ यो त यसलाई गाउँमा राख्नु हुँदैन लोदर लाग्छ” भनेर सबैले भन्न थाले। बाटो हिँड्ने, वल्लो गाउँ, पल्लो गाउँ, सबैतिरकाले मलाई हेर्न आउँथे। एकदिन समाज बस्यो र “कि यसलाई यहाँबाट खेद् कि आफू गाउँ निकाला हु” भनेर मेरा परिवारलाई अप्ठ्यारोमा पार्‍यो। त्यसपछि म आफैँ यसलाई बोकेर त्यहाँबाट हिँड्न बाध्य भएँ।
२०६३–७–७ गतेको बिहान आज। भाइटिकाको दिन। टेलिफोनको घण्टी बज्यो। उठाएँ। मैले हेलो भनि नसकी स्वर गुञ्जियो निलिमाको। तीनवर्ष भो यसरी उनले मलाई भाइटिकामा फोन गरेकी। भनिन् “सर नमस्कार, आज भाइटिकाको दिन। हजुरको याद आयो र फोन गरेकी। म कहाँछु कृपया नसोध्नु होला। बस आज भाइटिकाको दिन हो त्यसैले माइतिलाई सम्झेकी हुँ। हजुर कहाँ आउने मन त नभएको होइन तर मेरो उपस्थितिले हजुरको पवित्र छविलाई दाग लगाउन सक्छ त्यसैले आउन असम्भव छ ।
“५ महिनाअघि बिरगन्जमा मृत्यु भयो। ‘‘छाडौँ सर यी कुराहरू यस्तै हो अहिले फोन राखेँ है।” मैले हुन्छ भन्न नपाई उनले फोन राखिन् तर फोन राख्न अघि उनको भक्कानीएको स्वर भने मैले प्रष्टसँग सुनेँ।
मान्छेबाट छलिएर बाँच्न मान्छेलाई कति कठिन हुँदोरहेछ। निलिमाको कथा देखेपछि थाहा भयो। म आज पनि सोच्छु, यति ठूलो संसारले किन लुकाउन सकेन निलिमाको त्यतिसानो बाध्यात्मक कथा र व्यथा ।